Simuka Street Team — Trip LEE - YEPAMUTEMO SARUDZA
Hey vakomana! bhuku My simuka anosunungura musi waJanuary 27 (vhiki rinouya!) uye ini rubatsiro rwenyu.
Tiri kutsvaka vanhu vanogona kubatsira kuva chikamu Street Team uye kutibatsira vachiparadzira shoko pamusoro bhuku paIndaneti uye avo evanhu vezvenhau.
Unogona tarisa zvakawanda pamusoro bhuku pa http:://RiseBook.tv
Munyengetero wangu kuti Mwari achatora bhuku rino uye kushandisa mashoko aro kupikisa chizvarwa chedu kuti simuka kurarama. Uye unogona kutibatsira kuparadzira mashoko kuti kusaina kuva chikamu yedu Street Team kuti bhuku.
Heano mazano zvichakanganisa kushanda ...
1 – Shandisa HERE.
Ngatizive zvakawanda pamusoro pako, nei uchida kuva chikamu chikwata, uye kugoverana iwe evanhu vezvenhau nevamwe Links paIndaneti nesu.
muparidzi wangu ichadzokorora application uye kana vakasarudzwa…
2 – Kuverenga pachine kopi bhuku.
Ivo achakumutsirai PDF bhuku kuverenga.
3 – Join voga Facebook Group.
Imi kukokwa abatane yepachivande Facebook Group kubva muparidzi wangu. There, uchaita kuwana savi pamusoro tigutsikane zvikuru kuudza shamwari dzako. Pane zvimwe zvinhu zvikuru zvichiitika nokubudiswa kuti uchaita kuda kuziva.
Ini kuti mifananidzo inokukurudzira muboka nguva shoma, wo!
4 – Fambisa Shoko!
All tikakumbira mukutsinhana advanced kopi ndiye waizozviita kuti kuparadzira shoko kushamwari dzako uyewo vaiswe vakatendeseka wongororo ebhuku kamwe waita mukana kutarisa kuti kunze.
Ndinodavira chaizvoizvo vanotenda shoko iri uye munyengetere kuti zvichava zvinokurudzira imi vamwe kuti vave akamuka chinangwa chaMwari muupenyu hwavo. Ngatitange sangano. Inogona kutanga newe.
TaylorBradian • Ndira 20, 2015 pa 10:16 ndiri • pindura
ndiri 21 egore mutendi ari baba chete kuti chakanaka 16 mwedzi musikana muduku. Neniwo ave Réservation mumiririri vemifananidzo mune Hip hwechiKristu Hop. Ndiri aivawo mukuru, chepuraimari dzidzo zvikuru (Chirungu), pana Campbell University muNorth Carolina. chokwadi, shoko raKristu ndarohwa rose nzira itsva, Makore shure apo ndakanga kuudzwa nezvechokwadi Christian Hip Hop. Vhangeri chaipiwa nenzira pandinofanira kuzvinzwisisa, uye kudzigovera shamwari dzangu. Makore mashoma shure, takava mukana kuunza Trip wangu mutaundi rokumusha Sanford, NC, apo aiva revashanyi rurege vake The Good Life Book Tour. Zvakanga rinotyisa kuona mhinduro vamwe vanhu vakanga, pavakanzwa uye vakanzwisisa evhangeri kokutanga. Ndingadai kufara kuva rumwe rubatsiro mukuparadzira shoko pamusoro bhuku idzva iri kubva Trip. Vanhu vanofanira kunzwa vhangeri yavo chechinyorwa saka vanogona kuzvinzwisisa. Kungofanana Trip akaita mubhuku rake rinonzi debut, Ndinotarisira kuverenga, Kudzokorora, uye kuudzawo ake nyaya hunoshanda uye rondedzera-kukwanisa nevamwe. Ndaiva rombo rakanaka zvokuti kugamuchira makore tariro shure, kuti pasakurumidza neni nokusingaperi. Ndinoda vamwe kuwana tariro chete iyi, uye ini kuramba chivimbo chokuti Trip zvakajeka uye muchidimbu anotura tariro iyi mubhuku rake idzva. Ndinokutendai nokuti nguva yenyu kuverenga ichi, uye ndiri kutarisira kubatsira mamwe mashoko ichi kuti isu tose zvikuru tinoda. Ngatitorei simuka pamwe!
David • Ndira 21, 2015 pa 10:22 pm • pindura
Thankyou Sooooo zvikuru nokuda mukana uyu rinotyisa kubatsira kuparadzira mashoko mubhuku renyu!! Ini handigoni kumirira yechi27!!!
David • Kurume 29, 2015 pa 5:13 pm • pindura
Ndakanga kumbobvira rakabatwa:(xD